Farmaajo oo xaraashaya shidaalka Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
DUBAI – Dowladda Soomaaliya ayaa ka qeyb galeysa shirka todobaadka Shidaalka Africa, kaas oo 8 – 11-ka bisha soo socota ee November, ka dhici doona, dalka Isutagga Imaaraadka Carabta [UAE] gaar ahaan magaalada Dubai, ee caanka ku ah dukaamaysiga.
Toddobaadka Shidaalka Afrika, waa madal sanadle ah oo ay ku kulmaan, waddamo dhowr ah oo dhaca qaradda, shirkado caalami ah, dad maalgashadeyaal ah, iyo shirkadaha saliidda dhoofiya, u jeedkuna waa in dalalku soo bandhigan saliidda iyo gaaska ay heystaan ee beeca u ah.
Madashan caalamiga ah oo lagu dhiirigeliyo heshiisyada iyo wax kala iibsiga Afrika, waxaa sanadkaan Soomaaliya, kaga qeyb galaya, wafti uu hoggaaminayo, Wasiirka Wasaaradda Batroolka & Macdanta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Axmed, oo ka mid ah dadka hadalka ka jeedin doona kulanka.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maxamed Xaashi Carabeey iyo Caasha Cismaan oo ah Maamulaha guud Hay’adda Shidaalka Soomaaliya, ayaa sidoo kale qeyb ka ah dadka Soomaaliya sanadkaan uga qeyb galaya Shirka Toddobaadka Shidaalka Afrika.
Inkstoo, Sharciga Bataroolka uu dhamaystirmay, hadana madaxda Dowladda Federaalka, gaar ahaan xilliga nidaamka Farmaajo, ayaa loogu eedeeyay in aysan u hoggaansamin sharcigaas, isla-maraaka ay si hoose shirkado shidaalka ka ganacsada ula galeen heshiisyo qarsoon, kaas oo caqabad ku noqon kara dowladaha soo socda.
Hoggaanka Dowladda Federaalka, waxaa hore si xooggan loogu dhaleeceyay in ay jebkooda ku shubteen malaayiin doollar oo laga soo qaaday shirkado loo saxiixay ruqsadaha baarista Shidaalka badda Soomaaliya.
Wasaaradda Batroolka & Macdanta, si daahfuran uma aysan caddeyn, qorshaha socodkooda iyo xogaha la xiriira kheyraadka oo ay la wadaagi doonaan shirkadaha caalami ah iyo maalgashadeyaasha ka qeyb galaya kulanka.
Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo wafti uu hoggaamin doono ee xubnaha Guddiga Batroolka, ayaa la rumeysan yahay in ay maalmaha soo socda ka ambabaxaan Muqdisho, si ay u soo xaraashaan xirmooyinka shidaalka Soomaaliya.
Tallaabadaan oo aan si buuxda loo caddeyn, waxaa loo fasiran karaa [boob hanti qaran], iyadoo laga duulayo marxaladda doorasho iyo kala-guurka lagu jiro, sidoo kale daah-furnaan la’aantu waxa ay dhaawaci kartaa dadaalkii iyo heshiiska geeddi socodka dayn cafiska ee Soomaaliya lagashay Hay’adda Lacagta Adduunka, (IMF).
Farmaajo iyo Kooxdiisa, ayaa caan ku ah ku takrifalka iyo musuqmaasuqa hantida Qaranka, waxaana la xasuustaa in shir la xariiray arrimaha shidaalka Soomaaliya oo 2019 ka dhacay London, lagu galay heshisyo hoose, kuwaas oo sababay in six un loo xaraasho eyb ka mid ah baloogyada Shidaalka.
Sanadkaan, 66% dawladaha Afrika ayaa ka qeyb-galaya isku imaatinka, halka 45 Wasiir iyo hoggaamiyaal kale oo dowladaha ka socda ay xaadiri doonaan Madinat Jumeirah oo ku taal Dubai.